मलेसियन केटीको कारण दिनेशको मृत्यु ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
मलेसियन केटीको कारण दिनेशको मृत्यु ?
रोजगारीका लागि ७ बर्ष अघि मलेसिया गएका सिन्धुपाल्चोकका दिनेश ठकुरीको मलेसियामा मृत भेटिएको खबर सार्बजानिक भएपछी उनको मृत्यु प्रकरण प्रति धेरैको शंका छ। बुवाआमालाई अति माया गर्ने उनि मलेसिया आएदेखि निरन्तर आमाबुवालाई फोन गरिरहन्थे । तलब थापेपछि मासिक रुपमा घर खर्च पठाई रहन्थे । ७ बर्ष सम्म छुट्टीमा नगएका दिनेशले परिवारको जिम्मेवारी प्रती केही पनि खोट लगाएका थिएनन् ।
दिनेशका दाजु दिपक ठकुरी आफ्नो परिवार सहित काठमाडौमा बस्थे । दाजुलाई पटक–पटक बुवा आमासँगै घर गएर बस्न सुझाइरहने दिनेशले आफ्नो दाईलाई भिडियो कल गरेर उनीहरु बिच लामो कुराकानी भएको त्यो दिन उनको अन्तिम बन्न पुग्यो ।
काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाउने अनि बुवाआमालाई ल्याएर राख्नेसम्मका कुरा दाजु भाइ बीच भए । दाजुभाईले सुखदुःख साटे, दिनेशले मलेसियाको कम्पनीमा लफडा परिरहेको कुरो पनी दाजुलाई सुनाएका थिए । एकदिन रातको समयमा दिनेशले आफ्नो दाजुलाई भ्वाइस म्यासेज पठाए । राति भएकाले दाजुले फोन हेरेनन् ।
दिनेशले धेरै वटा भ्वाइस म्यासेज दाजुलाई पठाएका रहे छन् । दाजु दिपकले भोलिपल्ट बिहान मात्र म्यासेज हेरेपछी आफ्नो भाईलाई फोन गरे, घण्टी गयो फोन उठेन । फोन गर्दा–गर्दा सायद ब्याट्री सकियो, मोवाइल अफ भयो । त्यसपछि दिनेशको फोन कहिल्यै लागेन ।